पार्टीमा कुनै समस्या छैन : केसी
नारायणगढ, ३ असोज । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिन काँग्रेसलार्ई कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् ।
नेपाल तरुण दल भरतपुर नगरसमितिले आयोजना गरेको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा सहभागी हुन चितवन आएका नेता केसीले भरतपुर विमान स्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीका लागि नेता रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवाको विषयमा सहमति हुन नसके बैकल्पिक उम्मेदवार दिनसक्ने बताए ।
देशको नेतृत्व गर्ने काँग्रेसभित्र तीन जनामात्र नेता नभएको भन्दै उनले तीन जनाको बीचमा सहमति हुन नसके बिकल्पमा अर्का व्यक्ति खडा गरिने बताए । विकल्पमा कसलाई उम्मेदवारी बनाउने भन्ने बारेमा उनले बताएनन् । काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नदिएकै कारण सहमति हुन नसकेको भन्ने भनाईप्रति नेता केसीले आपत्ति जनाए ।
दलहरुका बीचमा सहमति हुन नसके नयाँ जनादेशमा जानुको बिकल्प नभएको उनको भनाई थियो । नेता केसीले एकल पहिचान र साझा पहिचानका बिषयमा जनमत सँग्रहबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताए ।
कुलाले बगाएर बालकको मृत्यु
नारायणगढ, २ असोज । मामाघर हिडेका नवलपरासीका एक बालकको कुलाले बगाएर मृत्यु भएको छ ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय कावासोतीले जनाए अनुसार मृत्यु हुनेमा शिवमन्दिर गाविस वडा नं. ३ निवासी रामु न्यौपानेका चार वर्षका छोरा अनुप न्यौपाने रहेका छन् ।
तिजका बेला आमा माईती गएकाले पछ्याउदैं मामाघरतर्फ जाँदै गरेका बालक न्यौपाने बाटोमा रहेको कुलोमा परी बेपत्ता भएका थिए । सोमबार दिउसोबाट हराएका उनलाई मंगलबार विहान स्थानीय मनकामना सामुदायिक वनको घोलमा मृत अवस्थामा फेला पारिएको थियो ।
बन्द नगर्न इन्सेकको आग्रह
नारायणगढ, २८ भदौ । नेकपा–माओवादीले गर्ने भनेको नेपाल बन्द कार्यक्रम आयोजना नगर्न अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) चितवनले आग्रह गरेको छ ।
इन्सेक जिल्ला संयोजक मुकुन्द दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बन्दको कारण बालबालिका पढ्ने विद्यालयहरुमा समेत प्रभावित हुने र आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि डेढ लाख विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकार हनन् हुने अवस्थाप्रति सचेत हुन सम्बन्धित सबैसँग आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा विद्यार्थीहरुलाई प्रभावित नहुने वातावरण सृजना गर्न, विद्यालय सञ्चालन गर्न र विद्यालयका सवारी साधानहरुलाई अवरोध नगर्न नेकपा माओवादी नेतृत्वलाई आह्वान गरिएको छ ।
रक्तसञ्चार केन्द्रको स्थापना
नारायणगढ, १ असोज । चितवन मेडिकल कलेजमा रक्तसञ्चार केन्द्रको छुट्टै ईकाई गठन गरिएको छ ।
रक्तसञ्चार केन्द्रको ईकाई स्थापनापछि अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामीलाई रगत लिन अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ ।
मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक हरिश्चन्द्र न्यौपानेको अध्यक्षता तथा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दुवाडीको प्रमुख आतिथ्यमा अस्पताल परिषरमा केन्द्रको उद्घाटन गरिएको हो ।
कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाईटी चितवनका अध्यक्ष हरिप्रसाद न्यौपाने, डाक्टर अरुण सेढाई, कालिदास अधिकारी, डाक्टर ममता तिवारीले लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
केराखेती व्यवस्थापन तालिम
नारायणगढ, २७ भदौ । एक गाउँ एक उत्पादन कार्यान्वयन समिति चितवनको आयोजनामा आइतबारदेखि शुरु भएको तीन दिने केराखेती व्यवस्थापन तालिम बुधबार रत्ननगरमा सम्पन्न भयो ।
एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत चितवन जिल्ला केरा खेतिको लागि छनौट भएको र केराको समग्र विकासका लागि उद्योग वाणिज्य संघ–चितवन र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनको सक्रियतामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आईरहेको छ ।
जिल्लाका २६ जना अगुवा केरा उत्पादक कृषकहरुको सहभागिता रहेको उक्त तालिममा चितवनका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत जगन्नाथ तिवारी, कार्यालयका योजना अधिकृत सन्तोषराज पौडेल, बागबानी अधिकृत धनबहादुर थापा, बाली संरक्षण अधिकृत शिवप्रसाद रिजाल र रामपुर क्याम्पसका डिन सुन्दर तिवारीलगायतले प्रशिक्षण गरेका थिए ।
उक्त कार्यक्रमको समापन समारोहमा उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनका अध्यक्ष डा. तिलचन्द्र भट्टराई, चितवन केरा व्यवसायी समितिका संयोजक यज्ञप्रसाद सुवेदी, रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानवहादुर विसुराल, प्राध्यापक डा. दुर्गामणी गौतम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत जगन्नाथ तिवारीले मन्तव्य राखेका थिए ।
संरक्षणमूलक तिज गीत प्रतियोगिता
नारायणगढ, ३० भदौ । सौराहा क्षेत्रमा काम गर्ने बिभिन्न ११ संघसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा भएको संरक्षणमूलक तिज गीत प्रतियोगितामा भरतपुरको नवआलोक युवा क्लब गौरीगञ्ज प्रथम भएको छ ।
यस्तै बिरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस साँस्कृतिक परिवार दोस्रो, जुटपानी एकेडेमी जुटपानी तेस्रो तथा पदमपुर शिक्षा निकेतन र मनोजरञ्न आमा समूह पदमपुर सान्त्वना भएका छन् ।
प्रतियोगितामा प्रथम हुने समूहलाई १५ हजार, दोस्रो हुनेलाई १० हजार र तेस्रो हुने समूहलाई पाँच हजार नगद र पुरस्कार उपलब्ध गराईएको थियो ।
कार्यक्रम संयोजक सुजाता पाण्डेको अध्यक्षता तथा मध्यवर्ती ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष यमबहादुर परियारको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा मृगकुञ्ज उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बासु चापागाई लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
कार्यक्रम मृगकुञ्ज उपभोक्ता समिति, सौराहा जेसिज, रेवान सौराहा, क्षेत्रीय होटल संघ सौराहा, बछौली गाविस, वन्यजन्तु संरक्षण समाज, वन्यजन्तु चोरी शिकार नियन्त्रण युवा जागरण अभियान बछौली, लायन्स क्लव चितवन सौराहा, निकुञ्ज सफारी, कम्युनिटी जिआईएफ लगायतका संस्थाको संयुक्त आयोजनामा भएको हो ।
मतदाता प्रशिक्षण तालिम
नारायणगढ, २६ भदौ । फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रको विषयमा घरघरमा जानकारी दिनको लागि विभिन्न निकायका व्यक्तिहरुलाई चारदिने क्षेत्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम चितवनमा शुरु भएको छ ।
निर्वाचन आयोग, निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्रको आयोजनामा भएको तालिममा जिल्लाका सरकारी कार्यालयका कर्मचरी र शिक्षकहरु सहभागी भएका छन् । सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, प्रहरी प्रमुख, अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख, सूचना अधिकृतलगायत २४ जनाको सहभागिता रहेको छ । यसैगरी दोश्रो चरणमा मतदाता प्रशिक्षकहरुलाई तालिम दिएर घरघरमा पठाईने कार्यक्रम रहेको छ ।
निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्न ज्यादै संवेदनशील हुने भएकाले सवै मतदातालाई जानकारी गराउनुपर्ने निर्वाचन आयुक्त देलखबहादुर गुरुङले बताए । निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि मतदातालाई दुविधा हटाउनु पर्ने उनले बताएका थिए ।
प्रशिक्षण तथा दरखाने कार्यक्रम
भरतपुर, २९ भाद्र । आदर्श बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको आयोजनामा तीज पर्वको अवशरमा महिला सशक्तिकरणमा सहकारीको भूमिका विषयक प्रशिक्षण तथा दरखाने कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।
संस्थाकी अध्यक्ष मीना खरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ऋषि घिमिरे प्रमुख अतिथि रहेका थिए । कार्यक्रममा सहकारी तथा डिभिजन कार्यालय चितवनका प्राचार्य श्रीकृष्ण नेपालले प्रशिक्षण दिएका थिए ।
कार्यक्रममा आदर्श नारी विकास केन्द्रकी अध्यक्ष सरिता केसी, आमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.की अध्यक्ष जानुका पराजुली, ई.भोजराज कौडेललगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
यसैगरी तीज पर्वकै अवसरमा एसपीएम कलेज गैंडाकोटमा पनि नवआगन्तुक विद्यार्थीलाई स्वागत तथा दरखाने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महेन्द्रभक्त अधिकारी, प्राचार्य गोविन्दराज विनोदी, दश जोड दुई संयोजक कृष्णचन्द्र भट्टराई लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रम लक्ष्मी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
नारायणगढ, २५ भदौं । भरतपुरमा कार्यरत दुईजना डाक्टरको गाडीमाथि सोमबारसाँझ अज्ञात व्यक्तिले आक्रमण गरेको छ ।
आक्रमणबाट भरतपुर अस्पतालका मेडिकल विभाग प्रमुख डा. बिजयप्रसाद पौडेल र बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका स्नायु रोग बिशेषज्ञ डा. बालकृष्ण थापाको गाडीको सिसा फुटेको छ ।
डा. पौडेलले आफू भरतपुर चौबीसकोठीबाट भरतपुर अस्पतालतर्फ जान लाग्दा निजी कारमा चढेर आएको एकजना अपरिचित व्यक्तिले गाडीमाथि आक्रमण गरेको बताए । उनले आफूले भागेर ज्यान जोगाएको बताए ।
यसैगरी उक्त व्यक्तिले डा. थापाको गाडीमा समेत आक्रमण गरेर भागेको बताइएको छ । डा. पौडेलको निजी कारको अगाडीको सिसा र डा थापाको कारको पछाडिको सिसा फुटेको बताए ।